Eksaody 29 - Ny Baiboly
15Alao ny iray amin'ireo ondralahy, ka Aarona sy ny zanany hametraka ny tànany ambonin'ny lohan'ny ondralahy; 16hianao kosa hamono ny ondralahy sy hananty ny rany ary handraraka izany manodidina ambony otely. 17Teteho ny ondralahy ary rehefa voasasanao ny taovany sy ny ranjony dia hapetrakao eo ambonin'ny tetiny sy ny lohany; 18dia hodoranao hanetona eo ambony otely ny ondralahy manontolo. Sorona dorana ho an'ny Tompo izany, hankasitrahany ny fofony, fanatitra atao amin'ny afo ho an'ny Tompo.
38Izao no hatolotrao eo ambonin'ny otely: zanak'ondry efa iray taona, roa isan'andro tsy tapaka. 39Ny iray amin'ireo zanak'ondry ireo hatolotrao ny maraina, ny iray kosa hatolotrao amin'ny àty takariva. 40Miaraka amin'ny ondry voalohany, hatolotrao koa ny lafarina tsara indrindra ampahafolon'ny efah voadity tamin'ny diloiloin'oliva, voatoto, ampahefatry ny hina, ary divay ampahefatry ny hina ho fanatitra araraka. 41Ny zanak'ondry faharoa hatolotrao amin'ny àty takariva dia hampombainao fanatitra sy divay hatao fanatitra araraka toraky ny tamin'ny maraina, ankasitrahana ny fofony, sorona atao amin'ny afo ho an'ny Tompo. 42Sorona dorana tsy tapaka izay tsy maintsy hatolotrareo amin'ny taona mifandimby ao amin'ny fidirana ny trano lay fihaonana, eo anatrehan'ny Tompo, dia eo amin'izay hihaonako aminareo mba hitenenako aminao. 43Fa hihaona amin'ny zanak'Israely eo aho, ka ho voahasin'ny voninahitro izany fitoerana izany. 44Hohamasiniko ny trano lay fihaonana sy ny otely, hohamasiniko Aarona sy ny zanany, mba ho mpisorona manao fanompoana ahy. 45Honina eo afovoan'ny zanak'Israely aho, dia izaho no Andriamanitr'izy ireo. 46Ho tantany fa izaho Iaveh no Andriamanitr'izy ireo, izay namoaka azy tany amin'ny tany Ejipta, mba honenako eo afovoan'izy ireo, dia izaho Iaveh Andriamaniny. >